တောင်ဥက္ကလာပ မဲဆန္ဒနယ်မှ စိန်ခေါ်သံများ | ပျူနိုင်ငံ
“ကျနော့်မှာ မူနှစ်ချက်ရှိတယ် ....
၁။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဟာ မိမိရပ်တည်ချက်ကို မိမိသစ္စာရှိရမယ်။
၂။ မိမိတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ် အမှန်တကယ် စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်း
ထားနိုင်ရမယ် ... ”
-၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ စ၍ အခြေခံပညာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ (BESU)၏
ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ဗဟန်းမြို့နယ်တို့တွင် တာဝန်အဆင့်ဆင့်ကို
ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်။
“ကောင်းမြင့်ထွဋ်ကို အမှုန့်ချေပြစ်မယ်၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း
နဲ့ ရွှေးကောက်ပွဲမှာ မဲဆွယ်ရမယ် ”
ကြံ့ဖွတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရန်ကုန် မြို့တော်ဝန်လား ???
ရန်ကုန်မြို့တော်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ တရားခံတစ်ဦးလား ???
Posted by ကိုအောင် at 17:55
ကိုကောင်းမြင့်ထွဋ်ဟာ အမှန်တစ်ကယ်ပဲ လေးစားထိုက်ပါတယ် ...။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူချမှတ်ထားတဲ့ မူနှစ်ရပ်ကို သဘောကျလို့ပါ ...။
အမှန်တစ်ကယ်တော့ ကျမနိုင်ငံမှာ ဘယ်သူပဲ အုပ်ချူပ် အုပ်ချူပ် ... မိမိတိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအပေါ်မှာ အမှန်တစ်ကယ် စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားနိုင်ရင် တိုင်းပြည်က ချက်ချငါ်း တိုးတတ် ပြောင်းလဲ လာမှာပါပဲ ... လူတွေဘယ်လောက်ပဲ ပြောင်းပြောင်း မူမပြောင်းသရွေ့တော့ ... တိုင်းပြည်ကတော့ ဒုက္ခရောက်နေဦးမှာပါပဲ ...။
26 October 2010 at 05:06
ဘာသာရေးအဓိကရုန်းနဲ့ ဘယ်လိုမဲဆွယ်မှာလဲ မသိဘူး။ လိုက်မမှီတာတွေများနေပြီဗျာ။
ကလူသစ်က တောင်ဥက္ကလာသားဆိုတော့ ဘယ်သူရွေးမလဲ
မဲမထည့်စတမ်း ဆိုပေမဲ့ မထည့်မနေရဆို အကျင့်သီလကောင်းတဲ့သူ တိုင်းပြည်အပေါ် စေတနာရှိတဲ့သူကိုတော့ ထည့်ခဲ့မှာပဲဗျာ.
Nov 7th ရွေးကောက်ပွဲ ကို လူထုတိုက်ပွဲအဖြစ် မကူးပြောင်းလျှင်- တောင်ဥက္ကလာသားတွေအနေနဲ့ ငွေကြာယံဘုန်းကြီးကျောင်းဖျက်ခဲ့တဲ့ ခွေးခြင်္သေ့ကြီး မဲရှုံးအောင်- အောင်သိန်းလင်းတို့ကြံ့ဖွတ်အဖွဲ့ကို စိတ်နာနာနဲ့ မဲ မပေးဘဲ ၊အသက်အငယ်ဆုံးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်ခဲ့သူ အကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လေး ဖြစ်ခဲ့သူ=တသီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း=ကောင်းမြင့်ထွဋ်ကို မဲပုံပေးဖို့လိုတယ်။
မဲတာကော မမဲတာကော... တာဘာမှမသိ ချင် .......
ကိုငှက်ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းထဲက စာသားလေးတွေကိုပဲ ပြန်ကြားယောင်မိတယ်...
“ဒီလောကကြီးအမြဲပေးဆပ်ဖို့အနှောက်အယှက် ရှိသမျှ ရှင်းပြစ်ဖို့.... သီချင်းတစ်ပုဒ်က မျှားတစ်စင်းဖြစ်ပါစေ”
သီချင်းနဲ့သာလူသတ်လို့ ရလို့ ကတော့ နေပူတော်သွားပြီး အသေခံ ဆိုပစ်မယ်........
ကိုမျိုးဝင်းဇော်...မေးရက်တယ်ဗျာ။ ကလူသစ်က တိုင်းပြည်မှာ ကြံ့တွေရော၊ ဖွတ်တွေရော၊ ဆင်တွေရော တခြမ်းခင်းလမ်းတွေပေါ်မှာ ပျော်စေချင်သူပါကွယ်။ :P
ခြင်္သေ့တွေလဲ ပါသေးတယ်ဗျ။ မေ့ကျန်သွားလို့။ တိရိစ္ဆာန်တွေ ပျော်ပါးကြတာပေါ့။ :P
ဧရာဝတီ စာမျက်နှာမှာ ပါတဲ့ ဒီသတင်းကို
အရင် ဖတ်ထားနဲ့ပါ၊ မကြာခင်
တင်ပါ့မယ် ခင်ဗျာ ...း)
အောင်ရမည် ... တဲ့။
ဆရာတော်တပါး ပြောပြထားတဲ့ အဆိုလေးပါ။
သီတင်းကျွတ်ပြီးလို့ တန်ဆောင်မုန်းလအ၀င်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခတွင်းက အလွတ်ရုန်းချင်ရင်တော့ ခြင်္သေ့ (ကြံ့ဖွတ်) နဲ့ တိုင်း (တစည) ကို ရှောင်ရင် အောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ နိမိတ်နဲ့ ရေးထားတာလို့ ပြောပါတယ်။
ဆရာတော်ပြောပြထားတာကြာပြီ။ ကိုအောင်ပို့စ် ၂ ခုနဲ့ ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ပြီး ပြန်သတိရလို့ ကိုအောင်ရေ ... ။
မဲပေးရမလား မပေးရဘူးလား စဉ်းစားနေတုန်း..
4 November 2010 at 17:15